ဒေါင်းလုပ်မည့်သူများ ဖတ်ပေးပါ - လင်း (စွယ်စုံ) ဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းရယူနည်း .....
| လင်း စွယ်စုံ
Premium Member Only !
WINDOWS SubMenu 1
SOFTWARE SubMenu 1
» ဒေါင်းလုပ်မည့်သူများ ဖတ်ပေးပါ
» ဒေါင်းလုပ်မည့်သူများ ဖတ်ပေးပါ - လင်း (စွယ်စုံ) ဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းရယူနည်း .....
လင်း (စွယ်စုံ) ဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းရယူနည်း ......ဒေါင်းလုပ်မည့်သူများ ဖတ်ပေးပါ......ဗျာ..
ဒေါင်းမတတ်သေးတဲ့သူများအတွက် လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနည်းများကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေကို တစ်ဆင့်ခြင်း အောက်မှာ နားလည်အောင် ဖတ်ပေးပါဗျာ။
အောက်မှာ Screenshots ပုံတွေ အတိုင်း ပါ... ခု တွေ့နေရတဲ့ ပိုစ့်လင့်လေးက ဖေ့ဘုတ်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ပိုစ့်လင့် တစ်ခုပါ...
အဲဒီ ... လင့်ခ် ကိုပဲ့ နှိပ်ပြီ ဆိုဒ်ကို ဝင်ပါ... ။
လင်း (စွယ်စုံ) ဆိုဒ်ကို ရောက်ပီဆိုရင် စိတ်တိုင်းကျ Software များစွာကို
ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ လင့်သေနေခဲ့ပါက ဒေါင်းလော့ခ် မရတဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာသာ Comment ရေး အသိပေးခဲ့ပါ။ ကျနော်တွေ့ရင် ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းမည်ဆိုပါက ပို့စ်ရဲ့ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ် >> Download Now << ဆိုပြီး တစ်ခုဖြင့် နှစ်ခုဖြင့် အမြဲ့တမ်း တင်ထားပေးပါတယ်..
ဒေါင်းလုပ်ဖို့ လင့် ကိုနှိပ်ရင် "< Adf.ly >" တစ်ခုခုကိုရောက်မယ်.. ၊၊
ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားမှာ 5/3 / 1 စက္ကန့်စောင့်ပြီးရင် "<< SKIP AD >>" ကို ထပ်နှိပ်ရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ဖိုင်တင်ထားတဲ့ လင့်ကိုရောက်ပါပြီ... အနည်းဆုံးဒေါင်းလင့် ကို လင့်နှစ်ခုနှင့် တင်ပေးထားပါတယ်.. တစ်ခုနဲ့မရရင် တစ်ခုနဲ့ ဒေါင်းပါ..
အောက်မှာ ကတော့ ကျနော် အမြဲ့တမ်း UPLOAD လင့်ခ် တင်ပေးထားတဲ့
ဆိုဒ်တွေက ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းနည်းလေးပါ။
Drive Link : က ဒေါင်းသူများအတွက်ကတော့ တွဲပြထားတဲ့ မျှားလေးနှစ်ကို
နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကို နှိပ်ပြီ။
နောက်ထပ်စာမျက်နှာ ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့် Download anyway ဆိုတာ
Mediafire လင့်မှာက အောက်က
>> DOWNLOAD << ကို နှိပ်ပြီ. ဒေါင်းပါ ၊၊
Zippyshare လင့်မှာ အောက်က >> Download Now. <<
ကို နှိပ်ပြီ. ဒေါင်းပါ ၊၊
Solidfiles လင့်မှာ အောက်က >> Direct download link <<
ကို နှိပ်ပြီ. ဒေါင်းပါ
Pcloud လင့်မှာဆိုတော့ အောက်က >> Download << ကို နှိပ်ပြီ. ဒေါင်းပါ ၊၊
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်ကိုလည်း
ဆိုဒ်နာမည် ထည့်ပြီ www.linmss.org ဆိုတာကို ထည့်ပေးပါ။
RAR Password 👉🏻 www.linmss.org
တကယ်လို့ ဒေါင်းလင့်တွေ တစ်ခုခု အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင်လည်း မူရင်း ... ပို့စ်အောက်မှာသာ Comments မှာ အသိပေးခဲ့ပါ..။
အခုလို လင်း(စွယ်စုံ) ဆိုဒ်လေးကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ နည်းပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်က ဝါသနာ သူငယ်ချင်းတွေကိုကျန်နော် လင်း(စွယ်စုံ)မှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင့် ဒေါင်းလင့်တွေတစ်ခုခု အဆင်မပြေတာ ရှိခဲ့ရင်လည်း အောက် Comments မှာ ပြောခဲ့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊၊
နောင်လည်း လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊၊
Author : လင်း(စွယ်စုံ)
★★★★★ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါသည် ★★★★★
" Thanthtet SoeJuly 26, 2016www.linmss.org Xiomi Service Tool ရဲ့ War password လေး ပြောပေးပါReplyDeleteRepliesလင်း(စွယ်စုံ)August 06, 2016Pass-www.linmss.orgDeleteReplyYar GicAugust 02, 2016လင့်​​တွေ​သေ​နေပြီဆရာReplyDeleteMyo myanmarAugust 06, 2016​ဒေါင်းတာ စုံ​နေပြီညီ​လေး​ရေ..ရကိုမရတာ...အခုဟာကReplyDeleteလင်း(စွယ်စုံ)August 06, 2016ဒေါင်းမရတာရော-လင့်တွေသေနေတဲ့ ပို့တွေအောက်မှာ Comment တွေရေးထားခဲ့ပါဗျာ...အကောင်းဆုံး ကူညီပေးပါ့မယ်။ReplyDeleteko koAugust 06, 2016File size က 400M ကျော်တယ်ဗျ Use လို့ရောရလား မရရင် တေပီReplyDeletecobra ko koAugust 08, 2016ပြန်​တင်​​ပေးပါလား​ဗျာလင့်​က​သေ​နေပြီReplyDeletecobra ko koAugust 08, 2016ပြန်​တင်​​ပေးပါလား​ဗျာလင့်​က​သေ​နေပြီReplyDeleteKo KoAugust 24, 2016eereer088765@gmail.com0823358531ReplyDeleteKo KoAugust 24, 2016(addrrsseereer088765@gmail.com)ReplyDeleteKo KoAugust 24, 2016This comment has been removed by the author.ReplyDeleteUnknownSeptember 07, 2016samsung new tool erro please brotherReplyDeletewathan478 wathanSeptember 12, 2016number တောင်းနေတယ် ဘာထည့်ရမှာ လဲ ကူညီကြပါဗျာReplyDeleteZay Yar htunSeptember 15, 2016I ever sloved my laptop problemsReplyDeletePloak NoraOctober 04, 2016i'm not see your link to downloadReplyDeleteSai TunNovember 04, 2016Pes2017ဖိုင်​ဘယ်​လိုဖြည်​ရမလဲ​ကျေးဇူးပြု၍ReplyDeleteChit ChitNovember 17, 2016အကို​ရေ ထိုင်းကထွက်တဲ့ဖုန်း firmwoare dtac zte L110 ရလား တူတူပဲးလား မသိလို့ ပြန်​​​ဖြေေ​ပေးပာါReplyDeleteAkar MaiDecember 06, 2016Obb rar fileက​ဒေါင်းမရပါဘူးခင်​​ဗျReplyDeleteAkar MaiDecember 06, 2016Obb rar fileက​ဒေါင်းမရပါဘူးခင်​​ဗျReplyDeleteAnonymousJuly 15, 2017thanksReplyDeleteAnonymousJuly 15, 2017မရပါဘူးReplyDeleteAdd commentLoad more...
နည်းပညာ ချစ်သူများ အဆင်မပြေတာများရှိရင် Comment Box မှာ စာချန်ထားခဲ့ပါနော် Link သေနေတာတွေ့ ရင် ပြောပေးခဲ့ပါ။ခုလို လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် လင်း-စွယ်စုံ - နည်းပညာ ဆိုဒ်မှ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အပါတ်စဉ် (၄) မိုဘိုင်းဖုန်း Software သင်တန်း တက်ရောက်သူတိုင်း ကြိုတင် စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါပီ။
Firmware Forum Member Only !
Myanmar All Sim Card Register [Telenor, MPT, Ooredoo, MecTel]
ကွန်ပျုတာမလို့ပဲ ဖုန်းနှင့် IMEI ရေးမယ်.. Android MTK All Devices]1000% Workind !
Kingroot Application APK (all versions) အစုံ ရယူရန် Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် Root မလို၊ အင်တာနက်မလို၊ Mi Acc မလိုပဲ မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ TTA Mi Lock Font V1.0 APK Programs All In One Tool Windows DriverWindows 10Windows 9Windows 8.1Windows 8 Windows 7Windows XP Windows LoaderWinRARWindows Fontsမရှိသေးပါ
Download Link Android FirmwareAcer AsusCherry Mobile Chilli Clone all Coolpad DTACG-Five HelloHisense Huawei i-mobile iCall Inovo jFone KenboKimflyLava Leagoo Lenovo LG M-Horse MASTEL Meizu MobiloMy phone NokiaNova Ooredoo Oppo Samsung Sim Unlock SingTechSKGSonySYHTablet allTrue Smart TWZ Uniscope VG VitalVivoWIKO X-BOXiaomi ZTEAURORA
မန်ဘာဝင်ထားခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ရှုရပါမည်။
Andriod 18+ Apk
Andriod Boot Logo
Andriod Fix Apk
Andriod Root ပြုလုပ်နည်း
Android SMS Unlocker
Android USB Install
Cracked Box Tools
iOS Device Activate
True Smart Firmware
Unpack - Repack Tool
Andriod Error ရှင်းနည်း
Bootable USB ပြုလုပ်နည်း
Internet Download Manager ဆိုင်ရာ
Miracle Box အသုံးပြုနည်း
Pattern Lock ​ဖြေနည်း
Qualcomm Firmware တင်နည်း
Storage Space တိုးမြင့်နည်း
မူပိုင်@ 2016 လင်း စွယ်စုံ